Ahene Nhoma a Edi Kan 12:1-33
Rehoboam ne nkurɔfo no ankasa abodwo so (1-15)
Mmusuakuw du tew wɔn ho (16-19)
Wosii Yeroboam hene wɔ Israel so (20)
Wɔka kyerɛɛ Rehoboam sɛ mma ɔne Israel nnkɔko (21-24)
Yeroboam ma wɔsom nantwi mma (25-33)
12 Rehoboam kɔɔ Sekem. Ná Israelfo nyinaa aba Sekem+ sɛ wɔrebesi no hene.+ 2 Nebat ba Yeroboam tee nea asi (saa bere no, Ɔhene Solomon nti, na waguan akɔtena Egypt).+ 3 Ɛnna wɔsoma kɔfrɛɛ no bae. Ɛno akyi no, Yeroboam ne Israel asafo no nyinaa baa Rehoboam nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: 4 “Wo papa maa yɛn kɔndua yɛɛ duru.+ Sɛ woma adwuma dennen a wo papa ma yɛyɛe ne kɔndua duruduru a ɔde too yɛn so no mu yɛ hare a, yɛbɛsom wo.” 5 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ, na edi nnansa a, monsan mmra.” Enti nkurɔfo no fii n’anim kɔe.+ 6 Afei Ɔhene Rehoboam ne mpanyimfo a ne papa Solomon te ase no na wɔsom no no kotuu agyina sɛ: “Afotu bɛn na mowɔ ma me na minhu nea mɛka akyerɛ nkurɔfo no?” 7 Ɛnna wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ ɛnnɛ wopene so sɛ wobɛsom nkurɔfo yi ayɛ wɔn abisade ama wɔn, na woka asɛmpa kyerɛ wɔn a, ɛnde wɔbɛsom wo daa.” 8 Nanso wamfa mpanyimfo no afotu no; mmom ɔne mmerante a ɔne wɔn sii so a na wɔabɛyɛ n’asomfo no kotuu agyina.+ 9 Obisaa wɔn sɛ: “Afotu bɛn na mowɔ ma me na yɛahu nea yɛbɛka akyerɛ nkurɔfo no? Asɛm a wɔde bae ne sɛ, ‘Ma kɔndua duruduru a wo papa de too yɛn so no mu nyɛ hare.’” 10 Ɛnna mmerante a ɔne wɔn sii so no ka kyerɛɛ no sɛ: “Nkurɔfo a wɔka kyerɛɛ wo sɛ, ‘Wo papa maa yɛn kɔndua yɛɛ duru, na wo de, ma emu nyɛ hare mma yɛn’ no, ka kyerɛ wɔn sɛ, ‘Me nsateaa ketewa mpo bɛyɛ kɛse asen me papa sisi. 11 Me papa de kɔndua a emu yɛ duru soaa mo, na me de, mɛma emu ayɛ duru asen saa. Me papa de abaa* na ɛhwee mo, na me de, mede abaa a nsɔe wɔ ho na ɛbɛhwe mo.’” 12 Sɛnea Rehoboam kae sɛ, “Monkɔ, na edi nnansa a monsan mmra” no, Yeroboam ne nkurɔfo no nyinaa baa ɔhene nkyɛn ne nnansa so.+ 13 Nanso ɔhene ne wɔn ankasa abodwo so; wamfa mpanyimfo no afotu a wɔde maa no no. 14 Sɛnea mmerante no tuu no fo no, saa ara na ɔne ɔman no kasae. Ɔkae sɛ: “Me papa maa mo kɔndua yɛɛ duru, nanso me de, mede bi bɛka mo kɔndua no ho. Me papa de abaa na ɛhwee mo, na me de, mede abaa a nsɔe wɔ ho na ɛbɛhwe mo.” 15 Enti ɔhene antie nkurɔfo no; Yehowa na ɔma ɛbaa saa,+ sɛnea ɛbɛyɛ a asɛm a Yehowa nam Siloni Ahiya so ka kyerɛɛ+ Nebat ba Yeroboam no bɛba mu. 16 Bere a Israel nyinaa hui sɛ ɔhene no antie wɔn no, wɔka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Dɛn na yɛne Dawid wɔ yɛ? Yɛrennya hwee mpo mfi ne hɔ. Ma Yese ba no mfa n’agyapade. Israelfo ee, obiara nkɔ ne nyame nkyɛn! Afei Dawid, wo ara hwɛ wo fi.” Ɛnna Israelfo nyinaa kɔɔ wɔn afi.*+ 17 Nanso Israelfo a wɔtete Yuda nkurow mu no de, Rehoboam kɔɔ so dii wɔn so.+ 18 Ɛno akyi no, Ɔhene Rehoboam somaa Adoram+ a ɔhwɛ apaafo so no, nanso Israelfo nyinaa siw no abo kum no. Ɔhene Rehoboam de, otumi foro kɔtenaa ne teaseɛnam mu guan kɔɔ Yerusalem.+ 19 Atua a Israelfo tewee+ wɔ Dawid fi so no, atoa so abesi nnɛ. 20 Bere a Israelfo nyinaa tee sɛ Yeroboam asan aba no, ntɛm ara na wɔsoma kɔfrɛɛ no baa asafo no anim, na wosii no hene wɔ Israel nyinaa so.+ Obiara anni Dawid fi akyi bio, gye Yuda abusuakuw no.+ 21 Bere a Rehoboam beduu Yerusalem no, ntɛm ara na ɔboaboaa Yuda fi ne Benyamin abusuakuw mu akatakyi a wonim ko* nyinaa ano sɛ wɔne Israel fi rekɔko na wɔasan adan ahenni no ama Solomon ba Rehoboam; ná wɔyɛ akatakyi 180,000.+ 22 Ɛnna nokware Nyankopɔn no ka kyerɛɛ ne diyifo* Semaia+ sɛ: 23 “Ka kyerɛ Solomon ba Rehoboam a ɔyɛ Yuda hene no, ne Yuda fi nyinaa, ne Benyamin abusuakuw, ne ɔman no nyinaa sɛ, 24 ‘Nea Yehowa aka ni: “Monhwɛ na mo ne mo nuanom Israelfo no ankɔko. Obiara nsan nkɔ ne fi, na me na mama aba saa.”’”+ Enti wotiee Yehowa asɛm, na wɔsan kɔɔ wɔn afi mu sɛnea Yehowa kae no. 25 Afei Yeroboam san kyekyee Sekem*+ wɔ Efraim mmepɔw so, na ɔtenaa hɔ. Ofii hɔ san kɔkyekyee Penuel.+ 26 Yeroboam kae wɔ ne komam sɛ: “Anhwɛ a ahenni no bɛsan akodi Dawid fifo nsam.+ 27 Sɛ ɔmanfo yi toa so kɔ Yerusalem kɔbɔ afɔre wɔ Yehowa fi hɔ a,+ wɔn koma bɛsan adan akodi wɔn wura, Yuda hene Rehoboam akyi; wobekum me mpo, na wɔasan akodi Yuda hene Rehoboam akyi.” 28 Enti ɔhene ne ne nkurɔfo tuu agyina, na ɔyɛɛ sika anantwi mma abien,+ ɛnna ɔka kyerɛɛ ɔman no sɛ: “Ɛyɛ den dodo sɛ mobɛkɔ Yerusalem. Israelfo, mo Nyankopɔn a oyii mo fii Egypt asaase so no ni.”+ 29 Ɔde baako sii Betel,+ na ɔde baako a aka no nso sii Dan.+ 30 Eyi ma wɔyɛɛ bɔne,+ na Dan a ɛwɔ akyirikyiri no mpo, ɔman no kɔsom ɛhɔ de no. 31 Na osisii abosom adan wɔ sorɔnsorɔmmea,* na ɔpaw ɔmanfo a wɔnyɛ Lewifo yɛɛ wɔn asɔfo.+ 32 Afei nso, Yeroboam ma wofii ase dii afahyɛ wɔ bosome a ɛto so awotwe no da a ɛto so 15 no mu, te sɛ afahyɛ a wodi wɔ Yuda no.+ Afɔremuka a osii wɔ Betel no,+ ɔbɔɔ afɔre wɔ so maa anantwi mma a ɔyɛe no, na ɔmaa asɔfo a ɔpaw wɔn no somee wɔ sorɔnsorɔmmea a ɛwɔ Betel no. 33 Enti bosome a ɛto so awotwe no da a ɛto so 15 no, ofii ase bɔɔ afɔre wɔ afɔremuka a osii wɔ Betel no so; saa bosome no, ɔno ara na ɔpawee. Ɔmaa Israelfo dii afahyɛ, na ɔforo kɔbɔɔ afɔre wɔ afɔremuka no so.
^ Nt., “wɔapaw wɔn.”
^ Nt., “nokware Nyankopɔn nipa.”
^ Anaa “hyɛɛ Sekem den.”